TOBANKA Difaac Dhexe Ee Ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Waqtigan Oo La Magacaabay Kaddib Finalkii Champions League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueTOBANKA Difaac Dhexe Ee Ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Waqtigan Oo La Magacaabay Kaddib Finalkii Champions League
TOBANKA Difaac Dhexe Ee Ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Waqtigan Oo La Magacaabay Kaddib Finalkii Champions League
May 31, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 2
Difaacyahannada dhexe ee ugu wanaagsan dunida ayaa la shaaciyey, waxaana kaalinta koowaad kusoo baxay Ruben Dias oo Manchester City khadka dambe uga ciyaara, kaas oo xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee uu ku qaatay Etihad Stadium ka sameeyey qaab ciyaareed cajiib ah.
Laacibka reer Portugal ayaa isbeddel badan ku keenay khadka dambe ee Man City, isagoo ka caawiyey in ay ku guuleystaan horyaalka Premier League iyo Carabao Cup, sidoo kalena finalka Champions League ayay yimaaddeen oo ay Chelsea ka qaadday.
Majaladda caanka ku ah ciyaaraha ee FouFourTwo ayaa qiimayn ay samaysay waxa ay ku sheegtay, in Ruben Dias oo kaalinta koowaad ku jira uu ku xigo difaaca reer Netherlands ee Virgil van Dijk oo Liverpool dhaawac kaga maqnaa xilli ciyaareedkii tegay oo dhan marka laga reebo laba bilood oo wax dhiman.
Van Dijk oo sidoo kale seegaya tartanka qaramada Yurub ee Euro 2020, waxa ay majaladdu ku tidho qoraalka ay ku sifaysay sababta loosoo geliyey kaalintan: “wuxuu leeyahay wax kasta oo aad uga baahan tahay difaac dhexe waqtigan casriga ah: xoog, orod, awoodda kubbadaha sare ee madaxa, tayo hoggaamineed iyo awood uu ku leeyahay kubadda.”
Difaaca reer Brazil ee Marquinhos ayaa soo galay kaalinta labaad iyadoo uu kabtanka PSG uu kooxdiisa tiir dhexaad u yahay, boosas badanna uga ciyaari karo.
Sergio Ramos iyo Gerard Pique ayaa iyaguna kusoo baxay liiskan inkasta oo ay labada kaalmood ee ugu dambeeya ku kala jiraan.
Kabtanka Manchester United ee Harry Maguire ayaa kaalinta shanaad fadhiy inkasta oo uu dhaawac ku seegay ciyaartii finalka Europa League ee ay kooxdiisu guul-darrada kala kulantay Villarreal oo rikoodheyaal kaga qaadday koobka.
Man City ayaa ciyaartoyda ugu badan ku leh tobanka difaac ee ugu wanaagsan, waxaana Dias soo raaca Aymeric Laporte oo afraad ku jira iyo John Stones oo ciyaartoyga toddobaad ee ugu fiican difaaca dhexe loo magacaabay.
Si kastaba, Thiago Silva oo Chelsea tiir-dhexaad u ah iyo laacibka dib usoo karaar-qaatay ee Antonio Rudiger ayaanu midkoodna liiskan ku jirin, waxaanay maqnaanshaha la wadaagaan Matthijs de Ligt oo waqtigii uu Ajax joogay meelaha ugu sarreeya kaga jiray qiimaynta difaacyada, halka Dayot Upamecano iyo Kalidou Koulibaly ay iyaguna maqan yihiin.
Halkan kaga bogo tobanka difaac dhexe ee ugu fiican:
Eder milateo aawey
War waa khiyaali waxan vandik hal kulan ma uu san safan championka see kalinta lbaad ku galy